८० वर्षपछि कुमारीको आसन फेरियो : RajdhaniDaily.com
Home Exclusive ८० वर्षपछि कुमारीको आसन फेरियो
ललितपुर । ८० वर्षपछि ललितपुरको जीवित देवी कुमारीको आसन फेरिएको छ । रत्नाकर महाविहारमा रहेको कुमारी घरमा जीवितदेवी कुमारीलार्ई विहीबार पहिलो पटक नयाँ आसनमा विराजमान गराइयो । यस अघि महाविहारमा गुरुजु (बेताजु) बुद्धरत्न बज्राचार्यले संकल्प र पञ्चोपचार पुजा गरे । त्यसपछि वडाको तर्फबाट सदस्य सुप्रभा शाक्यले विहारका ज्येष्ठ सदस्य चक्रेश्वर आजु (ज्येष्ठ सदस्य) ज्ञानबहादुर बज्राचार्य र सिद्धिरत्न बज्राचार्यलाई आसन हस्तान्तरण गरे ।
चाँदीको कलात्मक आसनमा सुन लेपन गरिएको छ । वरिष्ठ कलाकार प्रचण्ड शाक्यले सो आसन तयार गरेका हुन् । यस अघिको पुरानो आसनको ढाँचालाई हेरेर कलात्मक तरिकाले नयाँ आसन तयार गरिएकोे बताइएको छ । नयाँ आसनको लागत ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
हरेक दिन नियमित पुजाको लागि जीवित देवी कुमारी सो आसनमा बिराजमान हुनेछिन् । यस अघिको आसन निकै पुरानो र जीर्ण भएको हुनाले नयाँ आसनको लागि वडाअध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्यलाई एक वर्ष अघि आग्रह गरिएको स्मरण गर्दै महाविहारका आजु सिद्धिरत्न बज्राचार्यले भने ‘नयाँ आसन हस्तान्तरण गरेर वडाले संस्कृतिप्रति सम्मान गरेको अनुभूत गरेका छौं ।’
अहिलेको आसन नेपाल संवत् १०६१ मा हर्खराज बज्राचार्य र उनका परिवारले प्रदान गरेका थिए । जीवित देवी कुमारीको परम्परा नेपालकै एउटा पहिचानको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिचित छ । नेवाः संस्कृति र जात्रा पर्वमा जीवित देवीको विशिष्ट स्थान रहेको छ । रातो मच्छिन्द्रनाथ तान्ने बेला, भोटो जात्रा, बडा दशैको अवसरमा पाटन दरबार क्षेत्रमा हुने पुजाआजामा कुमारीलाई आसनमा राखेर उपस्थिति गराउने गर्दछ ।
सर्वप्रथम आजको दिनमा यो श्लोक पाठ गर्ने गरिन्छ: “सरस्वती मया दृष्टा वीणापुस्तक धारिणी, हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतुमे ।” यसरी प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीलाई...
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान ‘सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हौं’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी दललाई एकजुट हुन आह्वान...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - June 14, 2021 0
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २९१८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण ५३ जनाको...
प्रदेश १ राजधानी समाचारदाता - August 31, 2020 0
शिक्षक अपरणमा संलग्नहरु ‘विप्लव’ छाडेको सही गर्दै धरौटीमा रिहा
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - December 8, 2020 0
सिन्धुली । तिनपाटन गाउँपालिका–८ बाहुनतिल्पुङ निवासी भीमसेन आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद भण्डारीलाई अपहरण गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुमध्ये ६ जना अदालतले मागेको धरौटी रकम तिरी...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - September 19, 2020 0
बिचार डा. देवीप्रसाद आचार्य - May 20, 2021 0
काठमाडौं देशको राजधानी, सबैको सपनाको सहर । हाम्रा आदिकवि भानुभक्तले अलकापुरी, कान्तिपुरी नगरीका नामले सम्बोधन गरेको सुन्दर सहर । देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र...
सांसद हराएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित
प्रदेश विजय नेपाल - April 28, 2021 0
पोखरा । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुने भनी निकै महत्वका साथ हेरिएको गण्डकी प्रदेशसभाको बुधबारको बैठक अन्ततः अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । संसदमा...